Bafuna uvo ngamaholidi | Isolezwe
Bafuna uvo ngamaholidi
Isolezwe / 19 June 2012, 1:06pm /
SEKUYITHUBA labantu baKwaZulu-Natal lokuba baphawule ngokwengezwa noma ukuncishiswa kwamaholidi kuleli njengoba ikhomishini ebhekele amalungelo amabandla ahlukene izotheleka kulesi sifundazwe kuleli sonto.
Ukuza kwale khomishini kufike ngesikhathi ibandla iNazareth Baptist Church elidume ngoShembe nalo lisemkhankasweni wokufuna ukuba nosuku okuzohlonishwa ngalo abaholi balo.
Le khomishini izohambela kulesi sifundazwe ngoLwesine nangoLwesihlanu lapho izobe inezigcawu ezizonika umphakathi ithuba lokuphefumula ngamaholidi njengoba kunempikiswano ngokuthi kumele yini ukuthi amaholidi ahambisana nemigubho yezenkolo kube ngamaholidi azofakwa ekhalendeni lakuleli.
Okhulumela abaseKuphakameni, uMnuz Edward Ximba uthe bangathanda ukuthi uMeyi 2, ube yiholidi ngoba wusuku okwakhothama ngalo umqali weNdlela, uMprofethi Isaiah Shembe, noma kube nguDisemba 19 okuwusuku okwakhothama ngalo Inkosi uJohannes Galile Shembe.
“Sisazobhunga neNkosi yaseKuphakameni uVukile ukuthi siye yini ukuyofaka izethulo zethu kule khomishini. Uma ivuma Inkosi sifuna olunye lwazo lube yiholidi elisemthethweni ngoba siyibandla elikhulu,” usho kanje.
Uthe uma amaKrestu enawo nabo babona kungakuhle babe nawo okuhlonipha abaholi abanomlando.
Abahlaziyi bezomnotho bathi kungadla leli lizwe u-R30 billion ngonyaka uma singase sinyuke isibalo samaholidi kuleli. Okunalokho kuphakanyiswa ukuthi asehliswe isibalo sawo njengoba abanye bethi uDisemba 26, okuyi-Day of Goodwill akubalulekile ukuthi ungaba yiholidi.
Esitatimendeni esikhishwe ngokhulumela le Khomishini, u-Adv Sipho Mantula kunxuswa abantu ukuba baphume ngobuningi babo ukuzophawula kanti ngemuva kwalezi zigcawu bazohambisa umbiko eMnyangweni wezaseKhaya.
UKhisimusi nePhasika yizona zinsuku ezisekhalendeni lamaholidi asemthethweni kuleli ezenkolo njengoba engu-11.
Umkhandlu wamabandla iSouth African Council of Churches, uphawulile wathi awuzimisele ngokuthi lezi zinsuku zikhishwe ohlwini lwamaholidi. AmaSulumane nawo afuna izinsuku zokuzila ukudla zifakwe emaholidini akuleli.